उद्योग बाणिज्य संघ चितवनको नतिजा कांग्रेस पक्षधरलाई झड्का नेकपा चितवन भित्र एकता कस्सिएको संकेत | इच्छा खबर |
उद्योग बाणिज्य संघ चितवनको नतिजा कांग्रेस पक्षधरलाई झड्का नेकपा चितवन भित्र एकता कस्सिएको संकेत
पछिल्लो समय चितवनमा हुने हरेक घटना क्रममा नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी(नेकपा)अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र भरतपुर महानगरका मेयर रेनु दाहाल,सभासदहरु कृष्णभक्त पोखरेल,सुरेन्द्र पाण्डे लगायतलाई जोडेर हेर्ने गरिएको छ । चाहे सानो नै किन नहोस् नेताहरुलाई चासो हुने विषय होस् वा नहोस् आमरुपमा चितवनलाई खासमा प्रचण्ड, रेनु दाहालसंग जोडेरै हेरिन्छ । गत उपनिर्वाचनमा चितवनको मतपरिणामलाई सवैभन्दा वढी यसैगरी विश्लेषण गरियो । भरतपुर महानगरको वडा नं . ६ गुमाउदा नेकपा नेतृत्वलाई पीडा त पक्कै भयो होला तर एउटै वडाको निर्वाचनको परिणामलाई लिएर पुरै पाटीको राजनीति नै सकियो कि भन्ने हिसाबले पनि व्याख्या गरियो ।
खासगरी प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काग्रेस, कांगेस निकटका शुभेच्छुकहरु यो परिणामवाट हौसिए, प्रचण्ड रेनु वा नेकपा नेतृत्वलाई कमजोर बनाउन खोज्ने वा देख्न चाहनेहरुले दीप प्रज्वलन नै गरे । तर कुनै एउटा बिषय वा प्रसङ्गले राजनीति धेरै तरङ्गित हेर्नु हुदैन भन्ने सन्देश मंगलबार साँझ अवेर मात्रै सकिएको उद्योग वाणिज्य संघ चितवनको मत परिणामले देखाएको छ । नेकपा चितवन झन् अब्बल र एकतावद्ध छ भन्ने सन्देश यो परिणामले देखाएको छ ।
हुन त उद्योग वाणिज्य संघ चितवनको अधिवेशनमा पार्टी देखिन हुदैनथ्यो । त्यही अभ्यास स्वरुप शुरुमा पूर्व अध्यक्ष सहितको आव्हानमा अध्यक्षका आकाँक्षीकाबिचमा गोलाप्रथा गरियो । ती मध्ये राजु श्रेष्ठ अध्यक्षमा र चुननारायण श्रेष्ठ बरिष्ठ उपाध्यक्षमा उम्मेद्वारी दिने घोषणा सर्वसहमत गोलाप्रथाबाटै भएकै हो । सहमति मात्रै भएन संगैसगै माडीदेखि मुग्लिनसम्म मतदाता भेट पनि चल्यो ।
तर सहमतिको मसी सुक्न नपाउदैँ चुननारायण श्रेष्ठबाट राजनीतिको शुरुवात भयो । उनले आफुसंगैको पदमा व्यवसायी विष्णु कंडेल पनि उठ्ने निश्चितप्राय भएपछि निर्वाचनसंग डराएर सहमति विपरित आफु निर्विरोध हुने बाटो खोजे । त्यो भनेको उनी पूर्णरुपमा सहमति भंङ्गको डिजाइनर भए । त्यसमा केही पूर्व अध्यक्ष पनि देखिए । विष्णु कडेँल नेपाली कांग्रेससंग निकट छन् ।
उनी निकटको पाटी नेपाली कांग्रेस कम्युनिष्ट विचारको व्यक्तिलाई हराउन पाए अर्को हौवा पिट्न पाइन्थ्यो भन्ने दाउमा थियो । चुननारायण यसैको शिकार भए । शिकार नै हुनु थियो भने अध्यक्षमा नै पुराना व्यवसायी ज्ञानेन्द्रमान शाक्यलाई पछाडी हटाएर आफै भिड्ने हिम्मत राख्न पथ्र्यो ।
विषय उनको कावुमा मात्रै थिएन नेपाली कांग्रेसको मिसन थियो रेनु प्रचण्डसंग जोडिएको व्यक्तिको हार होस् ।
राजु श्रेष्ठको हार किन सम्भव भएन ?
एक त उनी विगत ६ वर्षदेखि उद्योग वाणिज्य संघ चितवनकै सेरोफेरोमा कुनै न कुनै रुपमा थिए । बरिष्ठ उपाध्यक्षको अनुभव लिइसकेका उनी जति समय वित्थ्यो त्यति नै व्यवसायीको आँखामा थिए ।
हरेक समस्यामा उनी तत्कालै व्यवसायीको दैलोमा पुग्थे । भोट दिने व्यवसायीले पनि भोलि के गर्ला भन्दा पनि हिजो के गरिरहेको थियो भनी छानेका छन् । अर्कोतर्फ उनको सम्वन्ध चितवनका सवै तह,तप्का,राजनीतिक नेतृत्व,सरकारी निकाय जतासुकै बलियो छ । उनले भनेको सुन्ने राजनीतिक नेतृत्व छ । नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डसंग सिधा भेट्न सक्ने हैसियतका व्यवसायी हुन् उनी । संघले उठान गरेका सवाललाई नेतृत्वसम्म पुर्याएर तत्काल समाधान खोज्न उनलाई दोस्रो व्यक्ति गुहार्न पर्दैन ।
अर्कोतर्फ भरतपुर महानगर अन्तर्गत पर्ने उवासंघ चितवनले महानगरको साझेदारीमा थुुप्रै काम पहिले पनि गरेको छ र भोलि अझ शशक्त भएर गर्नेछन् । त्यसको लागि सवैभन्दा उपयुक्त पात्र राजु थिए र भोलि झन् सहज हुने उद्योगी व्यवसायीले सहजै अनुमान लगाउन सक्छन् । सरल स्वभावका राजुलाई हारेको देख्न पाए प्रचण्डको जिल्लामा अर्को हार भन्ने शिर्षक राखौला भन्नेहरु पनि थिए ।
तर समय सधै र सबै स्थानमा उस्तै कहा हुन्छ र । उवासंघको मतपरिणामबाट हौसिन भने नेकपा समर्थकहरु हुदैन । यस्तो रस्साकस्सीलाई वुझेर चितवनमा जस्तो एकता नेकपाले हरेक ठाउँमा देखाउन जरुरी पनि छ । जे होस् अहिले जस्तो राजनीति सायदै देखिएको थियो उवासंघमा । चुननारायण श्रेष्ठको सहमति भङ्ग, नेपाली काग्रेसको कारण बनेको राजनीतिक रस्साकस्सी र यसैकाबिचमा आएको मतपरिणमामा भारी मतान्तरले राजुको जीतको पगरी । जीतलाई सहज रुपमा लिएर सबैै व्यवसायीलाई एकतावद्ध गरी व्यवसायीक हितका लागि मात्रै उनको कदम चलोस् राजु श्रेष्ठ सहितको टिमलाई हार्दिक वधाई तथा शुभकामना । (लेखक नेकपा निकट प्रेस संगठन नेपाल चितवन शाखाका संयोजक हुन् )